गर्भमा छोरा छ की छोरी, यस्ता छन् छोरो जन्मने ४ लक्षणहरु - Internet Khabar
गर्भमा छोरा छ की छोरी, यस्ता छन् छोरो जन्मने ४ लक्षणहरु
January 11, 2019 January 11, 2019 Internet Khabar
काठमाडौं । गर्भमा भएको बच्चा छोरा होस् या छोरी आमाबुवालाई उक्त बच्चाको आगमनको दिनको पर्खाइ रहन्छ र उत्तिकै उत्साह रहन्छ । तर, गर्भमा रहेको बच्चा छोरा होला या छोरी होला भन्ने उत्सुकताले पनि सताइरहेको हुन्छ ।
गर्भमा छोरा या छोरी छ भन्ने थाहा पाउनको लागि जाँच गर्नु अहिले गैरकानुनी मानिन्छ । समाजमा व्याप्त लैंगिक असमानता र भ्रुण हत्याका कारण सरकारले गर्भमा रहेको बच्चाको लिङ्ग परिक्षण गर्नुलाई अपराध मानेको छ ।
यसले गर्दा दम्पतिले अस्पताल तथा क्लिनिकमा गएर गर्भमा छोरा छ या छोरी छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैनन् । अस्पताल तथा क्लिनिकमा जांच गर्ने चलन नहुँदाको पहिलेको समयमा गर्भवती आमामा आउने परिवर्तनका आधारमा मानिसहरुले उसको गर्भमा छोरा छ या छोरी छ भन्ने अनुमान गर्थे ।
गर्भवती आमाको पेट गर्भमा बच्चा बसेपछि बढ्दै जान्छ । यसरि पेट बढ्दै जाँदा यदि पेट अगाडी पट्टि चुच्चो हुने तरिकाले बढ्यो भने छोरा भएको तथा पेट गोलो आकारमा बढ्यो भने छोरी भएको अनुमान गरिन्छ । यसको साथै गर्भवती आमाको स्तन कसिलो र गह्रौं भयो भने छोरी र सामान्य नै रह्यो भने छोरा हुने अनुमान गरिन्छ । त्यस्तै, गर्भमा छोरी भएमा गर्भवती आमाको पिसाबको रंग हल्का पहेंलो र छोरा भएमा गाढा हुन्छ ।
गर्भवती आमाको खानपानले पनि गर्भमा छोरा छ या छोरी छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गर्भमा छोरी भएमा गर्भवती आमाले गुलियो खानेकुरा खान मन लाग्छ भने छोरा भएमा अमिलो खानेकुरा खान मन पर्छ । र, गर्भवती आमाको मुटुको चालको आधारमा पनि गर्भमा छोरा छ या छोरी छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विषालु घाँस खाँदा गोठमै एकैपटक १२ बाख्रा मरे
अफ्रिकी युनियनको चुनावी प्रचार शुरु, एएनसीका लागि फलामको च्यूरा
शरीरका अंग दुख्ने र सुनिने समस्या छ ? दैनिक अमला खानुस्
निरोगी भएर धेरै वर्ष बाँच्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ नियम
तपाईं गलत तरिकाले सुतिरहनुभएको त छैन ? यो हो सहि तरिका
January 28, 2019 April 8, 2019
बच्चालाई आमाको दुध पुगेन ? सुत्केरी आमालाई खुवाउनुहोस् यो परिकार